गम्भीर बन्दै डा. केसीको स्वास्थ्य अबस्था, मन्त्री फेर्नमा ब्यबस्त सरकार | Khash Khabar
गृह गम्भीर बन्दै डा. केसीको स्वास्थ्य अबस्था, मन्त्री फेर्नमा ब्यबस्त सरकार
गम्भीर बन्दै डा. केसीको स्वास्थ्य अबस्था, मन्त्री फेर्नमा ब्यबस्त सरकार
१४ आश्विन २०७७, बुधबार ०३:०४
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै लामो समयदेखि अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीकोको १९ औं अनसनको १७ दिन पुगिसकेको छ ।
१९ औँ पटक जुम्लाबाट अनसन शुरु गरेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । केसीको उपचार समूहका संयोजक डा. सुवासप्रसाद आचार्यका अनुसार उनलाई छाती र मांसापेशी दुख्नेसँगै रिँगटा लाग्ने समस्याले धेरै कमजोर बनाएको छ ।
अनशनको समय लम्बिदै जाँदा केसीलाई बढी थकान महसुस भइरहेको छ । केसीको शरीरमा सोडियम, पोटासियम, म्याग्नेसिय, क्याल्सियम फस्फोरसको मात्रा कम हुँदा थप समस्या भइरहेको छ । मुटुको चालमा समेत समस्या आएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् ।
उहाँको रगतमा सेता रक्तकोषको मात्रामा समेत कमी आएको छ । भदौ २९ गते जुम्लाबाट अनशन सुरु गर्नुभएका केसीलाई असोज ६ गते काठमाडौं ल्याइएको थियो । उनी अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत छन् ।
अनसन बसेको १७ दिन पुगिसक्दा पनि केसीको जिवनरक्षा र मागहरुप्रति सरकार बेखबर देखिएको छ । केसीको स्वास्थ्यअवस्था बिग्रिँदै जाँदा पनि सरकारको बेवास्ता गरेको भन्दै विभिन्न सरोकारवाला समूहले जीवन रक्षाको माग गर्दै आएका छन् ।
चिकित्सकले केसीको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा तत्काल आइसीयूमा सार्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारी पक्षले अहिलेसम्म यसबारे कुनै चासो देखाएको छैन ।
केसीका मागको सम्बन्धमा उनका सहयोगीले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएरै औपचारिक जानकारी गराएका छन् । तर, यस विषयमा सरकारले चासो नै नदिएको केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीको भनाइ छ ।
यता सरकार भने कोरोना भाइरसको समयमा अनशन बसेर केसीले गलत गरेको भन्दै उनको स्वास्थ्यलाई बेवास्था गरिरहेको छ । देश र जनताका लागि अनशनरत डा केसीका माग सम्बोधन गर्नुको साँटो सरकार उनका मागप्रति बहिरो भएजसरी मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन र सत्ता लुछाचूडिमै ब्यस्त देखिन्छ ।
महानमारीका बेला केही पनि काम गर्न सकेन भनेर आलोचनाको शिखर सम्म पुग्न सकेको सरकार करिब ६ महिनादेखि सत्ताको लुछाचुँडि र भागबण्डामै ब्यस्त देखिन्छ ।